Mifananidzo inoratidza iPhone 7 nematoni mana muFlash Yechokwadi toni | IPhone nhau
Kunyangwe zviri pachena kuti nharembozha haifanire kuiswa mumvura, chimwe chezvivakwa izvo nharembozha inotarisirwa kuve nayo iPhone 7 kuramba kwemvura. Iyo iPhone 6s yatotora danho rakakosha mune izvi, yakabata zvinwiwa chaizvo, asi haina kugamuchira chero chitupa chekuita zviri pamutemo. Gore rino, kana isu tikateerera kune mamwe mifananidzo rakabudiswa NaPhonGee, iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichaona mamwe makuhwa achizadzikiswa uye ichave necheti chakafanana neApple Watch, IPX7.
Mufananidzo uyu wakaburitswa nezuro neOnLeaks uye unoratidza a SIM kadhi tireyi nemusiyano uri pachena: rabha iyo yatinogona kuona kunze kwayo, iyo inosangana mukati meiyo bezel. Irabha iyi haisi paSIM tireyi yeimwe yemhando dzakaburitswa kudhara uye aizove nechinangwa chekuti mvura yaisapinda kune mudziyo kuburikidza neiyo slot.
1 IPhone 7 SIM tireyi inoratidza kusagadzikana kwemvura
2 Toni Yechokwadi ine 4 toni
IPhone 7 SIM tireyi inoratidza kusagadzikana kwemvura
Kune rimwe divi, ndichitarisa tireyi yeiyo SIM yeiyo iPhone 6s ndinoonawo kuti nhanho yatinoona mumufananidzo wekare haapo, ndiko kuti, pane chete tireyi uye chikamu chinobatana nebhezera. Mumwe mutsauko uyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti inogona kuve montage, inoratidza izvo Apple yaunza ruzivo izvo zvingangoita kuve kuramba kwemvura.
Toni Yechokwadi ine 4 toni
Kune rimwe divi, PhonGee yakaburitsawo mumwe mufananidzo unonakidza waunayo pazasi. Yakatariswa nemiseve mina, tinogona kuona kupenya Tone True Chii chinoitika kuve neyemaviri matoni aivapo kubva kuiyo iPhone 2s kusvika pamumvuri mina KGI yakanga yatofambira mberi, iyo yaizoshandira kutora mifananidzo ine rakanyatsojeka ruvara kana uchishandisa iyo flash.
Munguva yese iyi, pese patakataura nezverunyerekupe, kudonha uye neruzivo rutsva nezve iyo iPhone 7 isu tati isu tichafanirwa kuramba takamirira kuti tione. Ichi ndicho chinhu chatichataurawo nhasi, asi ikozvino isu tangove nemaawa mashoma ekuti tiwane chokwadi chese zviri pamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo inoratidza iPhone 7 nematoni mana mune iyo flash uye isina mvura
Kuve iri pfupi nguva pamberi pechiratidziro kunoita kuti zvese zviwedzere kuvimbika, handizvo here?
Mhoro Francisco. Mune maonero angu, hongu uye kwete. Kune rimwe divi, zviri nyore kuti zvinhu zvinyoroveze padyo patinowana nekuti izvo zvinhu kana iwo machira pachawo akafamba zvakanyanya. Kune rimwe racho, kunyepedzera kunogona kugadzirwa chero nguva.